आजदेखि फुटबलको महाकुम्भ, समारोहलाई भव्य बनाउन रुसको तयारी कस्तो छ ? – Everest Dainik
आजदेखि फुटबलको महाकुम्भ, समारोहलाई भव्य बनाउन रुसको तयारी कस्तो छ ?
काठमाडौं, जेठ ३१ । पुर्वी युरोपमा पहिलोपटक विश्व फुटबलको महाभुकम्प हुँदै छ, जसको सौभाग्य रुसले पाएको छ ।
आज सुरु हुने यो महाभुकम्पको सदुपयोग गर्दै रुस ईतिहासकै उत्कृष्ट प्रतियोगिता बनाउने दाउमा छ
मस्को र अन्य १० सहरमा विश्वकपका खेल हुनेछन् ।
मस्कोमा दुई रंगशाला लुनजिकी र स्मार्टक छन् भने अन्य १० सहरमा १, १ रंगशाला छन् ।
दुई पटक ब्राजिललाई विश्वकप जिताएका लिजेन्ड रोनाल्डोले मैदानमा ट्रफी भित्राउनेछन् । ‘प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल प्रतिकात्मक हुन्छ । फुटबल प्रेमी, खेलाडी, पदाधिकारीलगायत सबैले यो क्षणलाई निकै महत्वपूर्ण अनुभव गर्दछन्’, ब्राजिलियन लिजेन्ड रोनाल्डोले भने, ‘किनभने यो क्षण चार वर्षको व्यग्र प्रतिक्षापछि आएको छ र आउँदो एक महिनाबीचमा के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन ।’
उद्घाटन समारोहका प्रस्तुतिहरु रसियाको च्यानल वनले निर्माण गरेको हो । तीन वर्षअघिको खेल तालिका सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि विश्वकपको सन्दर्भमा भएका र जुलाई १५ सम्म हुने सबै कार्यक्रमहरुको डिजाइन फेलिक्स मिखाइलोभले गरेका हुन् । -एजेन्सी
ट्याग्स: Fifa World cup, विश्व फुटबल